Torohevitra momba ny boky - Church of God World Switzerland
Tongasoa eto an-trano
Fandefasana Vaovao iray manaitra ny saina sy ny H izanyvoapaika.
Miaraka amin'io famindrana ny Testamenta Vaovao io, i Fred Ritzhaupt dia mitondra anao ho akaiky kokoa an'Andriamanitra izay nampahafantarin'i Jesosy ho "Abba, Dada". Ny fanasan'Andriamanitra hiditra amin'ny fifandraisana manokana aminy dia asongadina ao amin'ny lahatsoratra.
Io famindrana io dia mampitambatra ny fiainana mahavelom-bolo ankehitriny sy ny fahatokisana amin'ny lahatsoratra grika tany am-boalohany. Ny tsy fisian-jaza, ny fitaterana fanazavana sy ny fehezanteny mahafinaritra mahatonga ny famakiana fahafinaretana madio.
Izay rehetra mankatò izany fifandraisan-dray amin'Andriamanitra izany dia tonga, farany "ao an-trano". Ny faniriana sy ny vavaka ataontsika dia ny namindra ity namanao ity ho any an-dàlana hody.
Ny trano bongo - faran'ny herinandro miaraka amin'Andriamanitra
Nataon'i William P. Young
Ny zanaky ny zandrin'i Mackenzie dia nanjavona taona maro lasa izay. Ny dian'izy ireo farany dia hita tao amin'ny trano fialofana any anaty ala tsy lavitra ny tranon'ny fianakaviana. Efatra taona taty aoriana, tao anatin'ny alahelo lalina fatratra azy, i Mackenzie dia nahazo fanasana vaovao mahaliana ity akanjo ity. Andriamanitra ilay mpandefa anao dia Andriamanitra. Na dia eo aza ny fisalasalany, nanaiky ny fanasana i Mackenzie. Manomboka ny dia mankany amin'ny tsy fantatra. Izay hitany fa hanova ny tontolon'ny Mack mandrakizay.
Ny miditra ao
Nisy olon-tsy fantatra niseho tamin’ny lehilahy antitra, mpampianatra teolojia, tovovavy jamba, eveka, mpitory ny filazantsaran’ny fanambinana ary mpivaro-tena tao amin’ny trano fisotroana. Fiction ara-teôlôjika nofenoina zava-nitranga ara-tantara ilay mpanafika1. Nafindra tany amin'ny taonjato faha. Miseho ho tsy fantatra i Jesosy mba hahitana raha hahita finoana eto an-tany izy. Ao anatin'ireo fihaonana mifono mistery, tsy ho an'ireo enina lehibe ihany no mipetraka ny fanontaniana, fa ho antsika koa: Inona no hataontsika raha hiseho i Jesosy?
Tsy maintsy ho adala aho hiainana an'io
Ny "Fiovam-po amin'ny fahombiazana radika" dia mitarika ny mpanoratra an'io boky io ho any amin'ny ghettos manaraka ny tsy manan-kialofana ary i Irak ho mpikatroka fandriampahalemana. Tantara feno fitiavan-tena, famoronana ary finoana izay manova an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny hetsika fitiavana ...
Ahoana no fomba iainanao ho kristiana? Shane Claiborne dia mitarika io fanontaniana io amin'ny fomba tsy mahazatra. Nandeha tany Calcutta izy ary niaraka tamin’i Mother Teresa tamin’ireo mahantra indrindra ao anaty mahantra - ary tao dia nihaona tamin’Andriamanitra tamin’ny fomba vaovao izy. Ny "fiovam-pandresen'ny radikaly nifandimby" dia nanimba ny teti-pivoarana matihanina, nitarika azy ho any amin'ny ghettos ao afovoan-tanàna niaraka tamin'ny olona nanadino ny fiarahamonina be voninahitra ary tany Baghdad tamin'ny fanombohan'ny ady tany Irak tamin'ny 2003 ho mpikatroka fandriampahalemana. Ny "extremista amin'ny asa soa" dia mitantara tantara feno fitiavan-tena, famoronana ary finoana izay manova an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fihetsika maneho fitiavana.
Ny fitiavan'Andriamanitra tsy hay fehezina
Alao sary an-tsaina ny andro nisy oram-be tany an-dranomasina: ny sambonao dia atsipy amin'ny alàlan'ny onja ary eo amin'ny famindram-po ny natiora. Herinaratra tsy azo tononina ary mahatalanjona amin'izany fotoana izany. Ho an'i Brennan Manning, sary mifanaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona izany - fitiavana feno fitiavana tsy mahalala fetra. Miaraka amin'ity hafatra mihetsiketsika ity dia ilay olona nalaza teo aloha dia niresaka tamin'ny olona izay niady teo ambanin'ny vesatry ny fivavahana. Iza no manana ny fahatsapana fa tsy hahavita ny fitakian'Andriamanitra mihitsy? Ity boky kely ity dia manam-pahefana hanova ny fomba fijerinao an'Andriamanitra indray mandeha.
Ny fitiavana dia manana ny teny farany
Rob Bell dia mifamaly amin'ny fanontaniana momba ny lanitra sy ny helo, ny fitsarana sy ny fahasoavana ary mamorona herim-po, amin'ny fomba tsara indrindra manafintohina, sarin'andriamanitra iray izay mitazona ny teny farany.
Ny Kristiana maro tsy tambo isaina no nifamaly tamin'ny fanontaniana hoe: Ahoana no ahafahan'ny finoana miteny amin'ny lafiny iray: Andriamanitra dia fitiavana ary etsy an-daniny dia manamafy ny mety hisian'ny olona an-tapitrisany hisaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Ao amin'ity boky ity, i Rob Bell dia mandinika ireo fanontaniana izay nipoitra avy amin'io fihenjanana io. Ahoana no ahafahan'Andriamanitra manala fatratra ny fahalalahana olombelona, ​​izay mitaky fitiavana ary mandritra izany fotoana izany dia hahatratra ny tanjony handresena ny olona rehetra ho amin'ny fitiavany? Ary ahoana no ahafantarana ireo teny momba ny famonjena, famaizana, fibebahana, lanitra ary afobe? Ity boky ity dia mampiseho fomba fijery tsy mahazatra izay mitondra any amin'ny fahitana: Ny vaovao tsara dia tsara lavitra noho ny nieritreretantsika teo aloha.
Ny fitarainan'ny gizika an!
Kristy nanafaka antsika ho afaka! Koa miorena tsara ary aza avela haverina aminareo ny ziogan'ny fanandevozana! (Galatianina 5,1). Ahoana no ahafahantsika miaina ankehitriny, isam-batan’olona na eo amin’ny fiaraha-monina, amin’ny fomba tena azo ampiharina amin’izany fahafahana izay nanafahan’i Kristy antsika izany? Ahoana no ahafahantsika mampiharihary ireo teritery ara-pivavahana izay miezaka mandroba antsika amin’izany fahafahana izany? Tsy nanoratra boky tsy tantara foronina momba ireo fanontaniana ireo ny mpanoratra, fa kosa mitondra antsika amin'ny tantara mampientam-po an'i Jake Colsen. Jake, tamin'ny voalohany mpiara-mitandrina ny fiangonana malalaka, dia afa-po tamin'ny Kristianisma sy ny paroasy ny fiainany mandra-pahatongan'ny zava-nitranga teo amin'ny fiainany izay mametraka fanontaniana vitsivitsy aminy, ary mandra-eny, mandra-hihaona amin'ny olona tsy fantatra anarana izay miresaka momba an'i Jesosy ho toy ny olon-tsy fantatra. raha nahafantatra azy manokana izy. Manozongozona ny finoan'i Jake teo aloha ny fomba fiainany. Moa Jaona ilay mpianatra nolazain’i Jesosy fa ho velona mandra-pihaviny? Ny fitarainan'ny gisa dia manoritsoritra amin'ny fihaonana telo ambin'ny folo izay niainan'i Jake tamin'ity vahiny hafahafa ity. Miaraka amin'ny fanampiany dia afaka miatrika ny tahony lehibe indrindra izy, mahafehy ny toe-javatra sarotra faran'izay sarotra ary amin'ny farany dia mahatsapa fifaliana sy fahafahana izay nofinofiny fotsiny hatramin'izao.
Sam Walker dia manana nofy hafahafa: Andriamanitra dia manolotra fampianarana azy amin'ny fitsipi-pitenenana. Ilay mpamorona vokatra tsy an'asa dia mandà izany ho toy ny nofinofy hafahafa. Saingy tampoka teo dia nipetraka teo amin'ny latabatry ny lakozian'i Sam Andriamanitra ary te-hitazona ny fampanantenany.
Ny lesona fitsipi-pitenenana masina dia lasa làlana nahagaga sy nanova ny fiainana ho an'i Sam - feno tolona anaty. Ambonin'ny zava-drehetra, misy ny tohan-kevitra amin'ny jeneraly, ny komandin'ny rindrina ara-pihetseham-po izay natsangan'i Sam ho an'ny fiarovany manokana. Satria arakaraka ny ahaizàn'i Sam ny tena maha-Andriamanitra azy, dia vao mainka tsapany fa tsy misy fepetra sy tsy manam-petra ny fitiavan'Andriamanitra, dia vao mainka mirodana ny fiarovany anatiny. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra, Sam dia nahita habakabaka vaovao ao aminy. Ny fitsipi-pitenenan'Andriamanitra dia mahatsikaiky rehefa mihetsika - momba ny fanaintainana sy ny fahasimbana, fa ny fitiavana, ny fanavotana ary ny fahalalahana bebe kokoa.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-943597-40-0
Ny boky kafe
Mila toerana iray ahafahan'ny tena misy ny tsirairay. Steven Kerner no nanao izany: asa be karama, vady lehibe, zanakavavy manam-bola. Saingy taorian'ny iray tamin'ireo fahatezerany nalaza ratsy dia noroahin'ny vadiny izy. Tsy maintsy miaiky i Steven fa tsy mahavita ny asany, tsy hainy ny mamonjy ny fanambadiany, ary tsy misy olona horesahina aminy.
Tampoka teo dia niseho i Andy izay tsy fantatra fa toa mahalala betsaka momba an'i Steven. Entiny any amin'ny Bo's Café izy - toerana iray hanjakan'ny fanekena, ny famelan-keloka ary ny fahasoavana. Teo, teo afovoan'ireo "tsy fisiany", dia nanomboka tamin'ny lalan'ny fiainana i Steven - ary ho an'Andriamanitra izay tia azy tsy misy fepetra.
Dynamism amin'ny fiainana
Tsy afaka mankatoa samirery ny didin 'Andriamanitra ianao. Fa Kristy velona ao amintsika. Ao amin'ny bokiny malaza eran'izao tontolo izao i Thomas dia mampiseho ny fomba ahafahan'ny Kristiana miaina ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ny finoana monotonous dia lasa fiainana mavitrika sy mino.
“Eny, tsy izaho, fa Kristy no velona ato anatiko” (Gal. 2,20). Mety ho teny filamatra momba ny fiainan'i Ian Thomas izany. Tsy azo atao ny mankatò ny didin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny ezaka ataon’ny tena. Fa Kristy velona ao anatintsika. Ao amin’io boky malaza eran-tany io, ny mpanoratra dia mampiseho ny fomba ahafahan’ny kristiana miaina ny herin’ny fitsanganana amin’ny maty. Ny finoana tsy misy dikany dia lasa fiainana mavitrika sy azo itokisana izay mampivelatra hery amin'ny fiainana andavanandro ary manala ny fotoana rehetra tsy ho eo anatrehany.
Fiainana avy amin'ny Abundance
Tsy misy mankaleo kokoa noho ny Kristianisma raha tsy misy an'i Kristy ary tsy misy mahaliana kokoa noho ny maha-Kristiana sy miaina fiainana feno miaraka amin'i Jesosy eto an-tany. Ny fiainanao ara-panahy dia tsy ny fiezahana ho tonga kristiana tsara, fa ny fihaonana am-pahavitrihana amin'i Kristy eto ary ankehitriny ary hampidirina azy amin'ny fiainanao. Ny toko fohy dia manome anao sakafo eritreretina isan'andro. Ny fanontaniana any amin'ny faran'ny fizarana dia manasa anao hifanakalo hevitra amin'ny vondrona na hisaintsaina mangina. Boky tokony hovakianao. Tsy mpivarotra an-taonany maro izy io fa tsy nisy dikany.
Fotoanan'ny fitiavana voalohany
Rehefa lehibe isika dia misy fiantraikany amin'ny fahatakarantsika ny finoana sy ny endrik'Andriamanitra koa ny fivoarantsika manokana. Misy karazana finoana ve manaporofo fa mety sy marina ao anatin'ity dingana vaovao amin'ny fiainana ity? Azontsika atao ve ny mifaly amin'ny finoantsika tsy tapaka na afaka mahita originality vaovao isika aorian'ny fotoanan'ny krizy sy ny fanilihana? Ho hitantsika mihitsy aza ve ny "fitiavana voalohany" amin'ny farany?
Ao amin'ny lahatsoratra fohy 43, i Hans-Joachim Eckstein dia miresaka momba ny lohahevitry ny finoana kristiana ary manazava azy ireo amin'ny fomba fijery mahagaga sy lalina amin'ny teolojia.
Ny lakilen'ny fiainana feno
Efa nandritra ny androm-piainany (1816-1900) ny mpanoratra JC Ryle dia nanjary resy lahatra tanteraka fa ny fahamasinana azo ampiharina sy ny fanomezana tanteraka ny tenany ho an Andriamanitra dia tsy zakan'ny kristiana maoderina intsony. Ny lohahevitry ny fahatahorana an'Andriamanitra manokana dia nanjavona tany aoriana. Ny fomba fiaina Kristiana dia ambany amin'ny faritra maro ary hadino ny maha-zava-dehibe ny fanajana ny fampianaran'Andriamanitra amin'ny fahazarana isan'andro. Ny fampianarana protestanta sy evanjelika mahasalama dia tsy misy ilana azy raha tsy miaraka amin'ny fiainana masina. Noheverina ho zavatra tsy misy fotony sy poakaty avy amin'ny olona laika mazoto sy mandinika izany dia manala baraka ny finoana. Mba hanoherana an'io fironana io dia ilaina ny fanovana lalana amin'ny alàlan'ny famelomana tanteraka ny fahamasinan'ny Baiboly.
Mpanonta 3L: ISBN 978-3-935188-31-9
Ny tsiambaratelon'ny finoana
Talohan'ny niovany fo dia i Fritz Binde (1867–1921) dia atheista mpiady sy sosialista manana fahaiza-miteny mazava hahafahany mambabo ny mpihaino azy. Taorian'ny niovany fo tamin'i Jesosy Kristy dia napetrany teo amin'ny fanompoana ny Tompony ny talentany ary tonga vavolom-belona nitory an'i Jesosy nitory ny filazantsara tao an-day sy ny efitrano izy. Nampiasainy koa ny talentany amin'ny fanoratana mba hamporisihana ny mpino amin'ny boky sy asa soratra maro hiaina ny finoan'izy ireo tsy misy fanekena. Maromaro amin'ireo sanganasa sarobidy indrindra ao aminy (oh: "On the Mystery of the Cross", "The Secret of Faith", "The Three Basic Conditions of following Jesus" sns) dia voarakitra ao amin'ity boky ity.
Miaraka aminao foana - taratasy fitiavana avy amin'i Jesosy
Isan'andro dia azonao antoka fa: tsy manam-petra ny fitiavan'i Jesosy anao! Amin'ity boky fampaherezam-panahy ity dia hahita teny avy amin'ny fomba fijeriny ianao. Teny fampaherezana sy fampiononana izy ireo. Teny izay miteny eo amin'ny fiainanao. Angamba maniry mafy ny hilamin-tsaina sy hilamin-tsaina miaraka amin'Andriamanitra ianao dieny izao? Sa mila manakaiky anao vao afaka mandray fanapahan-kevitra tsara amin'ny toe-javatra sarotra?
Na aiza na aiza misy anao amin'ny dia ataonao manokana amin'ny fiainana: ireo devotions ireo dia mitondra anao amin'ny fahanginana ary manampy anao hamerina ny batterie eo anatrehan'Andriamanitra.
Fitiavana sy fanajana
Vehivavy te ho tian'ny vadiny tsy an-kanavaka. Ny lehilahy iray dia te-hanaja ny vadiny tsy misy fepetra. Ity no tsiambaratelo lehibe indrindra amin'ny fanambadiana mahomby. Ny fitsipiky ny Baiboly amin'ity boky ity dia hanampy anao hahatakatra bebe kokoa ny mpiara-miasa ary hahatsapa ny zavatra ilain'ny tsirairay. Asehoy amin'ny vadinao ny fitiavana amin'ny fiainana andavanandro. Ary mianara ny fomba hanehoan'ny vadinao ny fankatoavana sy ny fanajana izay zava-dehibe aminy. Ho hitanao ny mpiara-miasa aminao amin'ny masonao hafa tanteraka - ary ny fiaraha-miasa ataonao dia hihalalaka hatrany sy tsy mahazatra.
iza ianao ao amin'i Kristy
Andriamanitra dia manolotra anao ny maha-izy azy tsy azo rava izay tsy azon'iza na iza esorina ary tsy misy afaka manampy azy. Izany no maha-vaovao anao ao amin'i Kristy.
Amin'ny fomba tena mazava sy manintona, Wilkin van de Kamp dia manazava hoe iza ianao ao amin'i Kristy. Izany indrindra dia ny fahafantarana ny fomba fijerin'Andriamanitra anao satria ao amin'i Kristy ianao. Ao amin’i Kristy no mahaforona firaisana tsy azo sarahina amin’i Jesosy ianao ary lasa sarobidy indrindra eo imason’Andriamanitra. Mifandray be ianao sy Jesosy ka hitan'Andriamanitra voalohany ao aminao Jesosy ary avy eo ianao! Izany no mahatonga azy tsy afaka manala ny masony aminao. Rehefa hitanao fa mijery anao amin'ny alalan'i Jesosy Andriamanitra dia hijery ny mpiara-belona aminao amin'ny mason'i Jesosy koa ianao. Atsaharo ny famolahana ny maha-izy anao taloha ary ankafizo ny maha-izy anao vaovao ao amin'i Kristy! Ho lasa olon-dehibe ianao.
Tsy maintsy maty ianareo vao velona
noho izany dia velona ianao alohan'ny hahafatesanao!
Ny evanjelistra malaza Hans Peter Royer dia naverimberiny fa Kristiana maro no tsy mbola niditra tao amin'ny hafatra ivon'ny filazantsara. Inona no dikan’ny hoe miaina amin’ny maha olom-baovao ao amin’i Kristy? Manome valiny mazava i Royer, marina amin'ny fiainana ary ara-panahy lalina.
Tao anatin’ny resadresaka manokana, dia nilaza imbetsaka i Hans Peter Royer, evanjelistra malaza, fa Kristianina maro no mbola tsy nahatakatra ny hafatra fototry ny filazantsara. Nahoana ny hazo fijaliana mihoson-drà? Ahoana no hahafatesako raha mbola velona aho? Inona no dikan’ny hoe miaina amin’ny maha olom-baovao ao amin’i Kristy? Manome valiny mazava i Royer, marina amin'ny fiainana ary ara-panahy lalina.
Aoka ianao ho tahaka an’i Jesosy
Niverina tany amin'ny magazay ihany ny klasika. Ilay mpanoratra sady pasitera be mpividy indrindra Max Lucado dia manasa anao hihaona amin'i Jesosy amin'ny fomba vaovao sy mivantana tanteraka mandritra ny 30 andro ary amin'izany dia ho tonga tahaka Azy bebe kokoa. Fampaherezam-panahy fohy sy azo ampiharina 30 andro - Ho an'izay maniry hanakaiky kokoa an'Andriamanitra. Ny fanompoam-pivavahana fohy isan'andro dia azo ampiharina, marina amin'ny fiainana ary marina ara-baiboly. Mety amin'ny fotoana mangina manokana, fa koa ho an'ny vondrona an-trano, vondrona kely ary ny fiaraha-monina.
Ny miaina fiainana isan'andro izay ahazoantsika antoka tanteraka fa tian'Andriamanitra tsy misy fepetra isika - tena azo atao ve izany, ary manao ahoana izany? Wayne Jacobsen dia mitondra antsika tsikelikely mba hahatakarana ny tena halalin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny fomba andikana izany zava-misy izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro miaraka Aminy. Hevi-dehibe iray dia ny hahatongavantsika amin’ny fanambarana mazava momba ny antony nahafatesan’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana ho antsika. Navelan’i Jesosy handevona ny vatany ny ota sy ny henatra, mba hahafahantsika mifandray amin’ny rainy. Ho vokany, dia hitantsika fa tsy nantsoina ho andevo isika, fa ho zanakalahy sy zanakavavy. Ity Ray ity dia tia antsika mahery sy lalina kokoa noho ny olon-drehetra eto amin’ity tontolo ity. Ny fitiavany feno fitiavana dia miaraka amintsika amin’ny toe-javatra rehetra. Manana fifandraisana velona aminy isika, izay manafaka antsika amin’ny fijalian’ny henatra sy manova antsika ho zanany.
Amin'ny lalan'ny fahasoavana
Kristianisma araka ny nantenainareo hatrizay
Na inona na inona zavatra efa noraisinao sy tratrarinao tamin'ny fiainanao, na inona na inona ho tratrarinao ary hotanterahinao - tsy misy mahafeno fifaliana lalina anao toy ny fiainana iray ao amin'i Jesosy Kristy akaiky io. Rehefa mihaona amin'ny olona amin'ny fahalemen'izy ireo i Jesoa dia tototry ny firehetam-po sy fientanentanana. Rehefa matotra am-pinoana miaraka amin'i Kristy ao am-pony izy ireo dia mitombo ny fahafaham-po sy ny fiadanam-po izay tsy ho hita eo amin'io lalan'ny fahasoavana io ihany.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-943597-05-9
Fahasoavana marina - Ny fampianaran'i Jesosy
Na ao amin'ny Toriteny teo An-tendrombohitra, tao amin'ny Rainay, na ao amin'ny Apokalipsy - ny ankamaroan'ny tenin'i Jesosy no boky ohabolana misy tombo-kase fito ho an'ny Kristiana. Matetika izy ireo dia diso fandray sy ampianarina diso. Izany dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny endrik'Andriamanitra sy ny maha-mpino antsika.
Greg Riether dia te hanampy antsika hahita ny fampianaran'i Jesosy eo amin'ny fahazavana ny fanekena vaovao ary hahafantatra izay tena tian'ny Tompo holazaina sy hotanterahiny. Ny ahiahiny dia ny hanafaka ny olona amin'ny rafitry ny lalàna taloha ary hitarika azy ireo hiditra amin'ny rafitra vaovao an'ny fanahy, ny fanekena vaovao. Raha ekentsika izany, dia hahita andinin-teny mahazatra ao amin'ny hazavana vaovao sy mamirapiratra isika ary afaka hanaiky azy ireo amin'ny farany tsy misy tahotra. Ho fantatsika fa amin'ny zavatra rehetra nolazain'i Jesosy sy nataony, dia miafina ny fitiavany sy ny fahasoavany.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-95933-066-4
Fahasoavana marina: ireo fanoharana nataon'i Jesosy
Na amin'ny fanoharana momba ny aviavy, na an'ny talenta nankinina, na an'ireo virijiny folo - dia maro amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy no mety ho latsaka an-katerena ho an'ny Kristiana. Matetika izy ireo dia diso fandray sy hadika amin'ny fomba diso. Izany dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny endrik'Andriamanitra sy ny maha-mpino antsika. Greg Riether dia te hanampy ny mpamaky azy hijery ny fanoharana nataon'i Jesosy raha ny fahazavana amin'ny fanekena vaovao. Amin'ny fomba tsotra sy velona, ​​dia mampanakaiky antsika kokoa amin'ireo tantara nolazain'i Jesosy izy mba hanafahana ny olona amin'ny fanekena taloha, ny rafitry ny asa sy ny nofo ary hampahafantatra azy ireo amin'ny fanekena vaovao.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-95933-122-7
Fahasoavana madio fanampiny
Nidina toy ny menaka io boky io - satria nanambara hafatra mazava sy mahasoa ho an'ny fanahy Kristiana marary i Ryan Rufus. Ny finoana miorina amin'ny tsy fahazoana diso dia mitarika ho amin'ny fiafarana ara-panahy. Izany no antony mahatonga an'i Ryan Rufus mazava tsara amin'ny lalan'ny fahalalahan'ny lalàna sy ny fahamarinan-tena amin'ny lalana tsotra sy manafaka ny fahasoavan'Andriamanitra. Na ny kristiana efa zatra dia manao fanosorana mahery amin'ny teolojia mamelombelona.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-943597-14-1
Ny hafatra mazava amin'ny fahasoavana
Ny fahasoavana no hafatra tena tsara indrindra azon'ny olona henonao hatramin'izay! Izy io dia manana fahefana hanafaka anao sy hanova anao ary hanome anao ny fiainana. Ny fahasoavana dia tsy mikasika ny fahalavorarianao fotsiny, fa tonga lafatra ianao lasa tonga ao amin'i Kristy. Ny fahitana hoe iza ianao no lasa ao amin'i Kristy dia mitarika anao hahita izay azony atao sy hataony amin'ny alalanao. Ireo vondrom-pampianarana matanjaka fito dia hanampy anao hampita fahasoavana amin'ny olon-kafa miaraka amin'ny mazava sy fahatsorana, ka mahatonga fifaliana sy hafanam-po ianao.
Ny filazantsara amin'ny teny folo
Mampiasa fehezan-teny folo, i Paul Ellis dia nohazavaiko indray mandeha fa tsy ny filazan'i Jesosy Kristy fotsiny dia tsy vaovao tsara fotsiny, fa ny hafatra mahafaly sy feno fanavaozana izay manafaka tokoa. Ao amin'i Kristy dia tiantsika, mihavana, voavonjy, mitambatra aminy isika, ekena, masina, marina, maty amin'ny ota, vaovao ary mpanjaka. Tsy misy intsony ny toerana ho an'ny ara-dalàna sy ny fisainana fampisehoana.
Mpanonta Grace Today: ISBN 78-3-943597-53-0
Ny filazantsara ao anatin'ny fanontaniana roapolo
Rehefa eny an-dalana hivoahana amin'ny ara-dalàna sy mankany amin'ny fahasoavana dia matetika isika feno fanontaniana. Mila mianatra hoe iza ary iza marina Andriamanitra ary inona ny asan'i Jesosy ho antsika. Ny fanontaniantsika dia toy ny fanalahidy mamoha ny trano firaketana. Ity valiny ity dia manana valiny ary manome antsika fanalahidy ho an'ny fifandraisana azo itokisana amin'Andriamanitra.
Ny fanontaniana ato amin'ity boky ity dia hitondra anao any amin'ny toerana vaovao. Ireo dia hampandihiza anao amin'ny havoan'ny sitraky ny rainao. Ary ny lehibe indrindra dia mitarika amin'ny fifandraisana lalindalina kokoa amin'i Jesosy izy ireo, izay ny valiny lehibe indrindra amin'ny rehetra.
Ilay mpamorona Grace Today, ISBN: 978-3-943597-48-6
Noheverinay fa sitrana izahay, fa ny ankamaroantsika kosa dia tsy nahatsapa fijery taloha sy tsy misy aina ho amin'ny fiainanao vaovao. Ity boky ity dia manaporofo fa ny olona dia miatrika olana amin'ny fahotany. Io dia nanapoizina ny mpiara-monina ary nanala ny vaovao tsara tany am-boalohany. Nametraka fenitra izay tsy ho vitantsika ny miaina - ka nilaza taminay ny tenany fa fitsipik'Andriamanitra izany. Ny sasany tamintsika dia nanao veloma an'io vela-poana io ary lasa zotom-po sy miahiahy ary tsy miraika.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-95933-055-8
Andriamanitra tsy misy fivavahana
Matetika ny Kristiana dia mitolona amin'ny fampihavanana ny fahasoavana sy ny didy. Fanerena hanao, feon'ny fieritreretana meloka ary tahotra no vokatr'izany. Tsy izany anefa no izy. Nasehon'i Andrew Farley fa ny fitandremana ny lalàna sy ny didy dia tsy olana intsony amin'ny Kristiana. Fa kosa, afaka mahita fitsaharana ao amin'Andriamanitra izy ireo ary miaina fiainana afaka. Ho an'i Andrew Farley, ny fiainana Kristiana dia zavatra iray voalohany teo ambonin'ny zava-drehetra: ny fiezahana mafy hampifaly an'Andriamanitra amin'ny sarany rehetra - fivavahana tsy misy fitsaharana sy henjana. Ny vokatr'izany dia reraka ara-panahy, fahasosorana ary koa fahadisoam-panantenana mafy tamin'ny fiangonana. Tao anatin'ireo fanontaniany sy fisalasalany anefa dia nahita zavatra nanova ny zavatra rehetra izy: ny zava-misy ny fahasoavan'Andriamanitra manafaka, tsy misy fepetra.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-943597-02-8
Ny evanjely mitanjalanja
Jesosy madio. 100% voajanahary. Tsy misy additives
Mandehana miaraka amin'ilay ballast tsy ilaina rehetra, miverina amin'ny hafatr'i Jesosy Kristy mahafaly sy manafaka amin'ny endriny voalohany! Izao no atsy ho an'i Andrew Farley, izay efa niaina manokana ny fomba fanarahan-dalàna, ny fanerena ara-pivavahana sy ny fahatokisan-tena mety hiteraka famoizam-po sy fahakiviana - satria tsy lavitra ny zavatra rehetra tonga amin'ny maha-kristiana dia ao amin'ny fanahin'i Kristy. Ny bokin'i Farley dia manova fiainana.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-943597-15-8
Ny mpanoratra ato amin'ity boky ity dia mitondra antsika amin'ny dia mahaliana amin'ny alàlan'ny tantaran'Andriamanitra amin'ny olona. Nohazavainy ny fanekena samy hafa nataon'Andriamanitra - tamin'i Abrahama, tamin'ny alàlan'i Mosesy ary ny farany ilay fanekena vaovao mandrakizay mandrakizay. Ary manana izany rehetra izany: Satria ao amin'i Kristy dia voavonjy indray mandeha isika rehetra ary mpandova an'Andriamanitra. Indrindra amin'ny fomba fijery ankapobeny dia mazava fa tsy afaka manampy na inona na inona intsony isika. 'Boky manamboninahitra sy manan-danja. Maneho ny fahafahana izay ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-943597-20-2
Voatendry ho fitondrana
Ny tsiambaratelon'ny fahombiazana tsy misy fiezahana, fanatanterahana ary fiainana mandresy. Fa maninona no be ny mahita an'ity boky ity ho rivotra mamelombelona? Antsoina ianao hiaina fahombiazana, fahafaham-po ary fandresena. Ity boky ity dia mampiseho ny fomba ahafahanao mandresy sy mifehy ny zava-tsarotra sy ny tsy fahampiana ary ny fahazarana manimba izay manakana anao. Tsy momba izay tokony hataonao izany, fa momba izay efa natao ho anao. Tsy mila manao na inona na inona samirery ianao, satria efa natao ho anao izany. Tsy mila mampiasa ny finiavanao hanery ny fanovana ianao - ny herin'Andriamanitra sy ny heriny no manova anao. Atombohy anio ny hiatrika sy hanjaka amin'ny aretina, ny fahasahiranana ara-bola, ny fifandraisana tapaka ary ny fahazaran-dratsy manimba amin'ny fahatokisana sy fahefana! Joseph Prince dia ray, vady ary namana mahafinaritra izay mitarika ny iray amin'ireo fiangonana lehibe indrindra eto an-tany. Ny fomba fiainany sy ny fampiasam-bolany manokana dia mahatonga ny teniny ho azo itokisana sy maharesy lahatra rehefa miresaka ny amin'ny fiainana mandresy sy be loatra izay ampanantenain'Andriamanitra antsika.
Mpanonta Grace Today: ISBN 978-3-943597-70-7